Eny Amin’ny Làlan’Ireo Mpifindra Monina Nanjavona Nandritra Ny Diany Ho any Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Eny Amin'ny Làlan'Ireo Mpifindra Monina Nanjavona Nandritra Ny Diany Ho any Etazonia
Nandika (fr) i Amélie Marin
Voadika ny 17 Febroary 2017 13:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, русский, English, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, Español
Mpitsoaponenana monina iray mitady hihoatra ny sisintany mankany Etazonia eo Tijiana San Diego. Mampahatsiaro ireo tsy afaka nihoatra ny sisintany ary maty nandritra ny fikasàny ireo tanambokovoko. Sarin'i Thomas Castelazo tao amin'ny Wikimedia Commons.
Rehefa misy vondrona mpitsoaponenana tratra eo am-piezahana hiampita ny sisintany eo anelanelan'i Meksika sy ny Etazonia, manenjika azy ireo hatrany mamakivaky tany tsy azo iainana izay tsy fantatry ny ankamaroan'ny Meksikana, Goatemalteky ary Hondoriana mikatsaka ho tonga any Etazonia mba hanatsara ny fari-piainana na handositra ny herisetra tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny firenena niaviany ny Patrulla Fronteriza [Mpisafo ny Sisintany].
Araka izany, ampiasain'ny manampahefana ny tany efitra ho toy ny “fitaovam-piadiana” izay mitondra ireo mpitsoaponenana an'aliny tsy manana taratasy ho any amin'ny fahafatesana na fanjavonana. Ny faritra atsimo andrefan'ny sisintanin'i Etazonia dia “fasana lehibe ho an'ireo nanjavona”, araka ny tatitry ny fikambanana No More Deaths/No Más Muertes [Tsy misy maty intsony] nangonin'ny The Guardian. Manamarika ny mpitondra tenin'ny fikambanana fa olona an'aliny maro no manjavona isantaona hatramin'ny taona 1990, ary roanjato sy arivo tamin'ny taona 2015 fotsiny.
Etsy an-danin'izany, tombanan'ny tarehimariky ny La Patrulla Fronteriza ho fara-fahakeliny enina arivo no maty hatramin'ny taona 1990. Nefa misy vinavina hafa mbola somary ambonin'izay. Sarotra ny mahazo isa tena marina na mifanakaiky, satria maro ireo faty izay tsy hita mihitsy.
Ankoatra ny fanenjehana sy fanaparitahana izay ataon'ny manampahefana, ny fanjavonanana ihany koa dia vokatry ny fandosiran'ireo “mpitily” na “mpamoly,” araka ny anaram-bosotra omena ny mpanao trafika izay manampy ireo mpitsoaponenana hiampita avy amin'ny firenena iray ho any amin'ny firenena iray hafa. Matetika mamitaka ny “mpanjifany” ireo mpanao trafika, ary milaza fa azo antoka ilay làlana fiampitana na dia tena hafa mihitsy aza no tena zava-misy: tany tsy azo iainana, mpisafo mailo, toetrandro tsy zaka zakaina ary ny tsy fisian'ny rano.
Nitatitra ny Biraon'i Washington mikasika ny Raharaha Amerika Latina (WOLA) fa krizy amin'ny maha-olombelona ny fitomboan'ny fifindramonina fa tsy loza mitato amin'ny filaminam-pirenen'i Etazonia.
Manoloana io olana io, maro ny fikambanana niorina, izay mampiasa ny sehatra nomerika ho toy ny fitaovana hahafahan'izy ireo manome ny mombamomba ny faty izay hita tany amin'ny taniefitra ary nolazaina fa ‘tsy fantatra anarana’.
Pataloha, bokotra fehikibo ary fanànana hafa manokana
I Have A Name/ Yo tengo Nombre [Manana anarana aho] dia antontan-kevitra iray mikendry ny hanamoràna ny fahazoana vaovao mifandraika amin'ny fahafatesan'ny olona araka ny fangatahan'ny ny fianakaviany. Te-hahafantatra ireto farany raha toa niharan'ny heloka bevava tany Amerika Afovoany ny havany, raha toa nalaina an-keriny tany amin'ny faritra atsimon'i Meksika izy ireo, voasambotra tany avaratra na tonga soa aman-tsara any amin'ny toerana alehany.
Tranga laharana 0409: “lobaka kafe misy ny sary famantaran'ny Guinness. Kiraro fitondra manao fanatanjahan-tena mitondra ny marika Nike; manana habe 8,5 amin'ny Amerikana, kilaoty mena mitondra ny marika Funk, habe lehibe indrindra. Hita tany Dos Palmas Ranch. ” Ny torohay momba ny fifandraisana dia hita amin'ny fanarahana ny rohy. Sary nalaina tamin'ny tranonkala, ary nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Mampiseho sarin'ireo fanànana manokana nipoitra niaraka tamin'ny fanànan'ireo mpitsoaponenana hitany tany Atsimon'i Texas ilay tetikasa nomerika. Niainga avy amin'ny haino aman-jery El Observatorio ao Texas ilay fandraisana an-tànana, izay – rehefa nomen'ny dokotera alàlana – dia naka sary ireo akanjo, rojom-bavaka, firavaka, fehikibo, kiraro, fihogo, haba, satroka, kitapo babena, bokotra fehikibo ary zavatra hafa izay mety ho zava-dehibe mba hahafahan'ireo izay mitady ny havany nanjavona mahita ny toerana misy azy ireny ary hahafantarana izay nahazo azy ireo.
Tranga laharana 0419: Saron-doha manga. Feta fanàsana nify sy borosy nify. Heverina fa ny faty dia hita tany amin'ny fari-piadidian'i Jim Hogg, fa nalevina tany amin'ny fasan'i Sacred Heart any amin'ny fari-piadidian'i Brooks County, avy eo nofongarina ny 23 may 2013. ” Hita amin'ny fanarahana ny rohy ny fifandraisana. Sary nalaina tamin'ny tranonkala ary nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Mandritra izany, ao amin'ny Facebook misy pejy antsoina hoe “Desaparecidos y sin reclamar en la frontera” [nanjavona ary tsy misy fitarainana tany amin'ny sisintany], izay manao asa mitovy ary manampy sarinà tombokavatsa izay manamora ny famantarana ireo faty. Afaka vakiana ao amin'ny fàham-baovao ny hafatra izay manambara ny toerana misy ireo havan-tiana:
FIANAKAVIANA HITA NY MISY AZY. MISAOTRA BETSAKA AMIN'NY FIZARANA!! (…) Faty hita tamin'ny talata 3 janoary 2017 tany Rio Grande, Hidalgo, Texas. Nampiseho famantarana fahalòvana amin'ny antonony ilay faty, afaka nofaritana fa olon-dehibe lehilahy, eo anelanelan'ny 30 hatramin'ny 40 taona ilay izy”.
Ireo mpampiasa (aterineto) izay maniry hampiasa ny sary sy ny torohay momba ireo havany nanjavona nandritra ny fanandramany hiampita ny sisintany dia afaka manao izany amin'io pejy io.
Ireny sary ireny no porofo mangiana mampiseho ny mahalasa afobe mahatratra 43°C ny tany efitra ho an'ireo tsy manana taratasy. Ny politikan'ny Amerikana momba ny fifindramonina sy ny fanamafisana ny fametrahana miaramila any amin'ny sisintany dia toa manery ireo mpitsoaponenana hilentika any amin'ny toerana izay tena mbola lavitry ny efitr'i Arizona sy any amin'ireo faritra hafa izay tsy fantatr'izy ireo.
Indro misy fijoroana vavolombelona tamin'ny fivahan'ny iray tamin'ireo raharaha :
Mifarana eo koa ny raharaha iray, ary misy fianakaviana iray misaotra anareo rehetra izay nizara ilay tantara ary nandray anjara amin'ny fahatongavany hatrany Mexicali, any Kalifornia Ambany.
Tamin'ny volana Oktobra, noho ireo sary izay navoaka, afaka namantatra tombokavatsan'ny havan'izy ireo izahay. Afaka niresaka tamin'izy ireo aho, ary nampalahelo, nifanojo ny rehetra, saingy nandrasanay mba hanao hetsika ireo fianakaviana mba hamantatra azy. Tamin'io volana io ihany, nohamafisina taminay fa tena i Emilio Hipólito io, fa nangataka taminay izy ireo mba haka fotoana ho an'ny fisaonana sy ny fanantenana ny hahita azy indray. Tamin'ny volana lasa, niantso anay izy ireo ary nanamafy fa efa mandry am-piadanana any amin'ny tanàna nahaterahany any Mexicali ny vatany amin'izao fotoana izao ary nifarana ny raharaha, sady nisaotra ireo olona rehetra izay nizara ilay tantara satria, raha tsy izany, mbola manontany tena ihany izy ireo ankehitriny hoe nankaiza izy (i Emilio)
Ary nofaranany hoe:
Niala ny tranony niaraka tamin'ny nofy i Emilio Hipólito, nefa tsy tafody intsony. Namelona fanantenana ihany ny reniny fa hiverina izy, nefa nandeha ny andro, nanontany tena ny amin'izay nitranga ry zareo.
Ankehitriny, mandry am-piadanana izy satria efa tena fantatra hoe izy, ary efa tafody any amin'ny toerana nahaterahany any Mexicali ny fatiny. Mankasitraka tanteraka ireo rahalahiny sy ny fianakaviany, indrindra ny reniny, satria niaraka niaina tamin'ny renin)y izy. Namela zanaka vavy kamboty izy. Mandria am-piadanana Emilio Hipólito.
Misaotra betsaka ry namana! Noho ianareo rehetra izany! Tena ilaina ny fanampianareo!
Maro amin'ireo mpitsoaponenana no misedra lahatra mitera-doza ary maty. Raha tsara vintana anefa izy ireo, mety ho hita ihany ny fatiny, saingy mandra-pahatongan'izy ireo any amin'ny fianakaviany, tsy manao afa-tsy ny mampitombo ny isan'ireo manjavona ry zareo, sy ireo izay notsoahina tamin'ny nofinofy Amerikana nefa tsy mba niaina izany akory.
Azia Atsinanana 3 herinandro izay
Amerika Latina 19 Novambra 2021